FENO 10 TAONA NY 7 FEBROARY 2009 : Tokony hosaziana izay tompon’antoka
7 Febroary 2009-7 Febroary 2019. Feno 10 taona katroka omaly ny tolom-panovana notakian’ny vahoaka. Fanovana ny fitondrana jadona sy ny fangoronan-karena ho an’olon-tokana tsy nijerena mihitsy ny tombotsoam-bahoaka tamin’izany fotoana. 7 février 2019
Dila iny ny folo taona ! Hatreto, tsy fantatra mazava hoe iza marina ilay tsy maty manota tompon’antoka tamin’iny raharaha iny. Saingy na izany aza, tsy misy ambony lalàna eto ary inoana fa ho toy ny sambo-balala main’andro ny fihazana ireo tompon’antoka tamin’iny raharaha iny ka raha tsy tratra tao anatin’izay folo taona izay izy ireo tsy maintsy mbola ho tratra ihany, na anio na mbola ho ampitso. Tsy azo ekena ny fisian’ny tsy maty manota eto amin’ny firenena satria izany ihany no efa namarina ny firenena tany anatin’ny hantsana lalin’ny fahantrana.
Ny Filohan’ny repoblika rahateo, omaly efa nilaza fa tsy ho ataony raraka an-tany ny ain’ireo rehetra namoy ny ainy tamin’iny andro iny. Tokony hosaziana tsy misy hatak’andro ireo tompon’antoka tamin’ity raharaha ity ary tokony hatao haza lambo mihitsy. Ny azo inoana aloha dia tsy ho ny olona nitaky ny fahamarinana sy nanohitra ny jadona nisy teto velively no hanao lefon’ivoha handripaka ny namany fa matoa ny tranga toy ireny nisy dia tao dia tao ireo tsy maty voalavo an-kibo, zatra nampanjaka ny didy jadona sy zatra nanao barofo nizahozaho nampanjaka ny heriny tamin’ny teny an’avona toy ny hoe : “tsapao aloha ny herinareo vao mitsapa ny ahy.” Teny rem-poko, rem-pirenena ka aoka tsy ho raraka an-tany tokoa ny ran’ireo 48 namoy ny ainy sy ireo hafa naratra mafy ary mbola mitondra takaitra hatramin’izao noho ny tolona nataony ho an’ny tanindrazana tamin’io andro io.
Niavaka ny fahatsiarovana ireo maty ho an’ny tanindrazana
Ny tantara tsy fanadino. Mirakitra tantara lehibe ho an’ny firenena sy ny taranaka faramandimby ny datin’ny 7 febroary. Ny taona 2009 tamin’io androio no nisian’ilay fatin’olona mikararana tetsy Ambohitsorohitra. Nahatratra 48 ny isan’ireo namoy ny ainy vokatry ny tifitra vary raraka nataon’ireo miaramila mpiandry lapa izay nahazo baiko tamin’ny filoha tamin’izany fotoana. Notsarovana, omaly izany, ary nomem-boninahitra manokana ireo maty ho an’ ny tanindrazana. Niavaka tsy toy ny isan-taona ny fahatsiarovana, noraiketina anaty sarina vorona, izay midika ho an’ny fahafahana ny sarin’ireo namoy ny ainy tamin’iny raharaha iny.
Raha tsiahivina dia niainga teo amin’ny kianjan’ny 13 mey ireo mpanao fihetsiketsehana. Ny filoha Andry Rajoelina no nitarika ny tolona tamin’izany, rehefa nanambara izy fa tokony hapetraka amin’ny toerany ny praiminisitra Monja Roindefo. Tsy nanaiky ny hiandry amin’ny fotoana hafa ireo vahoaka marobe nangetaheta fanovana fa nitaky avy hatrany hoe “izao dieny izao”. Raikitra ny diabe, hiram-bavaka no noentin’izy ireo niakatra ny lapan’Ambohitsorohitra saingy tifitra vary raraka tsy nifankahitana no nitsena azy ireo.
Nirarakopana ny fatin’olona, natao vono moka ny Malagasy mpiray tanindrazana. Folo taona aty aoriana, mahatsiaro hatrany io zava-doza niseho teto amin’ny firenena io ny rehetra. Omaly, feno ny fahatsiarovana natao ho an’ireo mahery fo lavo tao anatin’ny tolona ho an’ny tanindrazana. Fametrahana fehezam-boninkazo, hiram-bavaka, tononkalom-pahatsiarovana, fampisehoana horonantsary no noentina nahatsiarovana azy ireo. Ny Filoham-pirenena, Andry Rajoelina, ny praiminisitra miaraka amin’ireo mpikambana eo anivon’ny governemanta ary vahiny maro no tonga nanatrika ity lanonam-pahatsiarovana ity, omaly.
Tsy nanameloka an’i Mamy Ravatomanga ny Fitsarana Frantsay FANOSORAM-POTAKA NATAON’NY HVM (244) 18 juillet 2019 Depiote tsy miankina 21 nanangana vondrona parlemantera iray ANTENIMIERAM-PIRENENA (87) 22 juillet 2019 Notanana am-ponja vonjimaika any Tsiafahy LEHILAHY IRAY NITORAKA POLISY (74) 19 juillet 2019 Nampiray ny Malagasy tsy vaky volo ny Barea KARDINALY TSARAHAZANA DESIRE (68) 16 juillet 2019 Voasambotra ilay jiolahy raindahiny tompon’antoka FANAFIHANA MPANDRAHARAHA (55) 17 juillet 2019 Enin-dahy nandroba 50 tapitrisa Ariary tamina 4x4 tra-tehaka FANAKANAN-DALANA TAO VOHEMAR (53) 19 juillet 2019